ahoana no hanambady ny norveziana, dia lehilahy avy any Norvezy, manambady any Norvezy, tsara ny Norwegians - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
ahoana no hanambady ny norveziana, dia lehilahy avy any Norvezy, manambady any Norvezy, tsara ny Norwegians
Naka vehivavy fahadiovam-po, ho toy ny fanomezana
Norvezy dia tsara tarehy eo amin'ny fahasamihafana sy ny fampiononana amin'ny firenenaNy mahafinaritra,"afa-po", manomboka amin'ny faritra, izay dia tery sy elongated endrika: ka na aiza na aiza Ianao, ny mampientam-po ny mpiaro ny ranomasina dia foana ho akaiky Anao. Noho izany dia afaka soa aman-tsara ny milaza fa ny Norwegians no tsy mahay sy za-draharaha tantsambo, fa koa ny tantaram-pitiavana-tsaina ny olona. Tsy fifanandrifian-javatra, ity firenena ity, ananantsika ny fisiana sy ny fananganana ny toy izany classics izao tontolo izao music toy ny mpamoron-kira-romanticist Edvard Grieg sy ny mpitendry lokanga OLE omby. Na izany aza, raha toa ka ny olona izay tsy mbola ao Norvezy, mihevitra fa firenena mafy ny toetrandro, ary ny mponina (indrindra ny olona avy any Norvezy) - foana maizina sy uncooperative, izy ireo dia mahita be dia be ny zavatra tsy ampoizina: rehefa Norvezy, angamba mihoatra noho ny firenena hafa, namorona avy ny fifanoherana. Eo amin'ny taniny ianao dia afaka mahita isan-karazany ny endriky ny. Ankoatra izany, ny ririnina eto dia tsy toy ny ao amin'ny lohataona sy ny lohataona ny vanin-taona mafana.
Lehilahy avy any Norvezy tsy afaka ny tsy toy izany
Vokatr'izany, rehefa Norwegians mandeha ao amin'ny ririnina-mafana akanjo ba sy ny palitao, ao amin'ny vanin-taona mafana izy ireo mijery lehibe miloko akanjo sy pataloha fohy. Manamarika fa Norvezy dia firenena iray, izay ny iray mandroso indrindra ara-toekarena ny firenena izao tontolo izao: moa ny vola miditra isam-batan'olona dia anisan'ny avo indrindra.
Ary izao no tsy mahagaga izany satria ny zavatra toe-karena dia manan-karena ny solika ary ny entona mipetraka ao amin'ny ranomasina Avaratra.
Efa ela ny fomba amam-panao izay refesina sy marin-toerana ny fiainana tao amin'ny firenena Tavaratra no tena mahasarika ho an'ireo mponina any amin'ny firenena hafa.
Noho izany, ny tsy nahy, maro ny mpiray tanindrazana mitady ny fahafahana mivory miaraka amin'ny Norwegians sy ny fomba hanambady ny zavatra.
Ny vokany: raha toa Ianao ka tia ny lehibe ny habeny sy ny hatsaran-tarehy ny toerana malalaka, mahatalanjona jiro Avaratra sy malemy fanahy hanandrana ny trondro, dia, ny tena mety, ny fahasambarana tokony ho hita ao Norvezy.
Ankoatra izany, mba hihaona ny anarana sy ny hanambady azy any Norvezy dia tsy ho sarotra araka toa raha vao jerena.
Tsy nanaiky ny tao Norvezy tany am-boalohany ny fanambadiana, fa raha ny lehilahy iray avy any Norvezy nanapa-kevitra ny hanambady, dia azo antoka fa avy izao momba ny vadiny sy ny fianakaviana izy, dia ho eo ambonin'ny mizana ny soatoavina eo amin'ny toerana voalohany.
Ny fanambadiana any Norvezy dia tena nankasitraka be ary izy io dia nino fa izany dia mampitombo ny toerana misy ny olona izay misy fiantraikany eo, ohatra, ny fampiroboroboana. Miombon-kevitra, inona no toe-tsaina manoloana ny fanambadiana eo amin'ny lehilahy avy any Norvezy dia antony tsara ny mieritreritra antsika ny vehivavy:"Te hamorona mafy sy ny fianakaviana sambatra. Te-hihaona amin'ny zavatra. Te-hanambady ny zavatra."Fa, ankoatra izany, fa ny olona avy any Norvezy mahafinaritra ny fianakaviana olombelona, ary nanan-karena ny mponina, koa izany no mahasarika ny olona izay zara raha afaka ny vehivavy ho tsy miraharaha. Mendri-kaja, lava, manga maso blondes, ny fon izay, koa, dia mafana"ho an'ny"ny Golfa renirano, dia afaka ketraka amim-pitiavana sy hatsaram-panahy ny hatsiaka sy reraka avy manirery 'ny fanahy, dia tena ankasitrahana eo amin' izao tontolo izao. Noho izany, maro ny vehivavy taorian'ny fihaonana amin'ny Norwegians matetika hanambady any Norvezy. Ny olona any Norvezy ho refesina kokoa noho ny vehivavy, ka ny vintana hihaona zavatra sy hanam-bady izay zavatra ho avy any ivelany ny vehivavy eo foana. Maro Norwegians ankehitriny ireo mikatsaka ny hiditra ao ny fanambadiana amin'ny any ivelany ny vehivavy. (Olona avy any Norvezy diso fanantenana ny vehivavy emancipated, ary tsy mikatsaka ny mamorona ny fianakaviana). Soa ihany fa avy any ivelany ny vehivavy dia matetika no mitady ny fahafahana hanambady ny anarana, dia mitondra mankany amin'ny famoronana tena mafy iraisam-pirenena ny fianakaviana. Be herim-po ampy sy efa vonona hanandrana ny vintana ny vehivavy ny nofiny, na inona na inona hipetraka na zom-pirenena. Foana ny mahafantatra izay tokony hatao, ary, na inona na inona ny harena ara-materialy, afaka mahatakatra ny fomba sy izay mandany fotoana miaraka amin'ny malalanao na miaraka amin'ny fianakaviana. Tsy menatra ny tenin ny fitiavana raha toa ka tena nandreraka. Ny lehilahy izay fa afaka ny handresy lahatra ny olona rehetra fa indrindra ny vehivavy, dia ny olona izay niaraka taminy ankehitriny. Fa mandritra izany fotoana izany, olona avy any Norvezy tena marefo ary noho izany mazava fa mila vehivavy manam-pitiavana sy amin-kitsimpo namana fanohanana. Izy ireo dia nahita fianarana, maotina sy tsy rava ny olona. Ny Norwegians dia tena samy hafa, fa raha miezaka ny generalize, izy no tompon'andraikitra, lehibe, marina, marani-tsaina sy mendrika, na dia indraindray somary tsotra loatra. Toy ny fitsipika, maotina, saro-kenatra, mafy-miasa, madio mangalahala sy unpretentious eo amin'ny fiainana, toy izay nasehon 'ny iray tamin' ny namany izy ireo dia toy ny sambo mpisitrika afaka Mizaka tena fikarohana, dia hoe aho afaka manasa, mahandro, madio ary amin'ny ankapobeny dia mikendry ny fiainana dia tsy mbola ratsy lavitra noho ny vehivavy rehetra. Taorian'ny fihaonana tamin'ny Norwegians dia marihana fa isaky ny anarana no manahy be loatra momba ny natiora, Hiking, jono ary dia toy izany fialam-boly, ary izany rehetra izany miaraka amin'ny namana sy amin'ny toerana tena ny jono, na ny rehetra - fianakaviana miaraka amin'ny ankizy. Mba hahafantatra ny zavatra Ianao, dia sady mahay te-hanambady any Norvezy, araka ny ho hitanao fa izy dia unpretentious amin'ny sakafo - dia afa-po aza ny pizza. Toy ny fitsipika, ny marina sy ny tsara, raha toa ka misy zavatra nampanantenaina - dia tena atao, nefa tsy mamela heloka ny lainga. Ny lalàna-maharitra, fa lehibe eo amin'ny fahafahana, tsy saro-kenatra alohan'ny birao birao. Matetika ny olona amin'ny ankapobeny tsy mahazatra miaraka amin'ny tsiro ny toaka. Ny zanany, dia tsy hilavo lefona, hampianatra, na dia hanampy, na mandroso ny fifandraisana miaraka amin'ny reniny. Ny mpahay siansa amin'ny Oniversiten'i Oxford vao haingana dia nitarika ny fianarana ny fomba ny olona mifandray amin'ny maha-lahy sy vavy andraikitra, raharaha sy ny akanin-jaza. Ny fianarana anjara ny firenena roa ambin ny folo. Ny isa ambony indrindra dia nomena ho an'ireo olona izay mety hanampy ny vadiny amin'ny raharaha sy ny fikarakarana ny ankizy. Ny vehivavy dia mahita azy ho manintona kokoa ho mety ho vady, ka matetika izy ireo no mazàna manana fianakaviana. Ny"mpandresy"ireo olona avy any Norvezy. Araka ny hay, ny ankamaroan'ny vehivavy dia te-hanambady ny zavatra. Ny lehilahy ity Pianakaviana firenena heverina ho afaka suitors, satria izy ireo no vonona kokoa mba hanampy ny vady ao an-trano. Fitoviana, ny fitovian-jo sy ny bebe kokoa ny fitoviana.
Manokana vola ho amin'ny fanovana andraikitry ny olona ao anatin'ny fianakaviana, toy ny any Norvezy, na dia teo amin'ny sehatra ara-panjakana, misy ny fomba fijery fa ny lehilahy sy ny vehivavy dia tokony ho tanteraka ny fitovian-jo tsy amin'ny fifidianana na ny fampiharana asa, fa ao amin'ny fiainam-pianakaviana, indrindra amin'ny fomba fijery ny zava-misy fa tamin'ny zavatra fianakaviana matetika ny asa amin'ny maha-mpivady azy.
Ahoana ny governemanta mikatsaka ny hanome fahafahana mitovy mba hikarakarana ny zanany, ny fitsinjarana ny andraikitra ao an-tokantrano, sns.? Taorian'ny fihaonana tamin'ny Norwegians raha vao lasa nazava fa ankehitriny Norvezy, dia ara-dalàna raha toa ka ny vadinao mahandro sakafo hariva sy ny fikarakarana ny zaza dia avelao mba hikarakara ny ankizy nataony tao amin'ity firenena ity, vao vaovao miaraka amin'ny ray reny.
Mpivady ny manapa-kevitra izay mahazo kokoa, ary iza no tsara kokoa ny mijanona eo amin'ny asa mandritra ny volana vitsivitsy voalohany aorian ny zaza no teraka. Olom-pantatra sy ny Norwegians dia handresy lahatra Ianao fa ny Ankizy no tena tia ny Norwegians. Mandrakariva hitsena ny mikarakara ray amin'ny prams sy ny siny hoditra ny ronono ho an'ny sakafo ny zaza. Tena nampihetsi-po. Zaza ho an'ny lehilahy avy any Norvezy dia zava-dehibe, ary izaho dia tsy handao azy araka ny fisaraham-panambadiana, aho, dia tsy handà azy ny fanohanana ny ankizy, dia ny fanampiana sy fanomezana.
Ny endri-javatra mahaliana amin'ny fampianarana ao an-toerana fa io zaza io dia ho mahazo ny rehetra, na ny saiky ny zavatra rehetra, raha vao toy ny ankizy amin'ny ankapobeny dia tokony hiala amin'ny afovoan-tanàna sy miara-miaina eo amin'ny manodidina, na tsara kokoa ny tao an-tanàna, ny saha sy ny rivotra madio, tena zava-dehibe ny zaza.
Saika isan-manaja tena zavatra fianakaviana manana trano fialan-tsasatra any an-tendrombohitra na ny amoron-tsiraka, ary mazava ho azy fa saika ho efa isaky ny fahadimy ny fianakaviana manana ny sambo. Afa-tsy zavatra ny olona no tsy matahotra ny manana ny ankizy miaraka amin'ny zanany malalany. Ary ny mazava indrindra ohatra izay mampiavaka ny toe-tsaina ny zavatra lehilahy ny vehivavy ny reny tokan-tena dia ny hoe Felipe, ny Printsy ny Norvezy dia nanjary voalohany eo amin'ny tantara ny Taloha izao tontolo izao nanambady ny vehivavy ny sarambabem-bahoaka ny taona, ary koa ny reny tokan-tena Mette-Marit.
Tsy mila zavatra hafa mba hazavao rehefa afaka izany,? Matetika dia toy izany ny fianakaviana, rehefa izany dia efa nisy teo aloha manambady, ankehitriny nisara-panambadiana izy ireo ary samy manana ny ankizy avy ny voalohany fanambadiana, raiki-pitia, hanambady ary ireo zanany.
Toy izany koa an'ity fianakaviana ity, dia handray ny ankizy rehetra, ary hitondra azy ireo mitovy. Eto dia miteny ny ankizy toy izany ny fianakaviana"ny Anareo ny Ahy sy ny antsika". Ka inona no Tsy mahazo manambady ny zavatra? Dia ho lasa olom-pirenena ny amin 'ny Fanjakan' Norvezy. Kely ny Fanjakana raha tsy misy ny ady, ny fahantrana, ny olana sy ny hanoanana. Ary ny zava-dehibe indrindra - ny miezaka ho tia ny vaovao an-Trano Norvezy. Hino ahy - fa mendrika izany. Soso-kevitra Ianao dia vakio ny lahatsoratra manaraka."Skandinavia dia mankaleo.Ahoana no mba handamina ny fanambadiana amin'ny Norvejiana Amin'ny maha-miasa ara-tsosialy ny rafitra ao Norvezy.Ny momba ny sekoly, ny asa ary ny karama aorian'ny fanambadiana Zavatra Krismasy". Vakio ny fomba fampiasana ny services mba hanambady ny zavatra. Isika ihany koa dia manoro hevitra anareo mba hahazoana mahafantatra tsara ny olona avy any Alemaina, Aotrisy, any Italia, Suède, Suisse, Espaina, Angletera, Frantsa fampahalalana bebe Kokoa momba ny olona ao amin'ny firenena Eoropeana izay miasa ny birao, ny toe-tsaina, ny fomba amam-panao sy fomban-drazana, Dia afaka mamaky ny fizarana vaovao"Momba ny fiainana ao Eoropa."Ao amin'ity fizarana ity izahay dia miezaka manangona ny tena vaovao mahaliana ho Anareo.
Fiarahana ho an'ny olon-dehibe tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana manambady vehivavy te hihaona aminao ny firaisana ara-nofo Niaraka video ny lahatsary amin'ny chat Chatroulette Mampiaraka ny tovovavy ombiasy tao Chatroulette maimaim-poana ny Fiarahana amin'ny fifandraisana Chatroulette avy amin'ny finday maimaim-poana maimaim-poana ny lahatsary online chat Mampiaraka Aho mitady tsindraindray fivoriana